I-Green ray: iyini, izici, ukuthi uyibona kanjani nezinganekwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | | Izimo zezulu
Umkhathi wethu ugcwele izimfihlakalo isayensi okufanele ixazulule. Kubalulekile ukwazi ukusebenza komoya ukuze wazi ngokuqinisekile okwenzekayo ngaphambi kokusungula noma yini. Enye yezindikimba zezimo zasemkhathini kuvele izinganekwane ngalokhu eluhlaza okotshani. Yize abantu abaningi besakholelwa ukuthi akusilo iqiniso, kodwa umphumela wokusungulwa kwamatilosi, kunezimo ezithile ezithile ukuze libonwe.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana ne-ray eluhlaza, besizothola ukuthi yiziphi izimfihlakalo ezihlanganisa lokho.
1 Iyini imisebe eluhlaza
2 Ukuqashelwa kwemisebe eluhlaza okotshani
4 Uyayibona enyangeni?
Iyini imisebe eluhlaza
Esinye sezimo zomkhathi esidume kunazo zonke yi-ray eluhlaza. Abantu abaningi basakholelwa ukuthi akusilo iqiniso, kodwa umphumela wokuqanjwa kwamatilosi abathi isikhathi eside bakubonile ohambweni. Izici zayo ezingafinyeleleki ikakhulu zibangelwa izimo ezikhetheke kakhulu okumele kuhlangatshezwane nazo ukuze zikubone, okusho ukuthi abantu abaningi abakaze bakuthole yize bebone ukutshona kwelanga okuningi nokuphuma kwelanga. Uma umoya uthule kakhulu, cishe akukho siphithiphithi sasemkhathini, futhi sitholakala phezulu, okungcono phambi komkhathi wolwandle, izimo ezinhle kakhulu zokuwubona zingatholakala.
Kuningi okushiwoyo nge-ray eluhlaza, ngoba wonke umuntu oyibuka ngaleso sikhathi uyakwazi ukufunda imicabango yabantu abahamba nayo. Izinkolelo ezigxile kakhulu yilezo ezikhomba ukuthanda. Isibonelo, abanye abantu bathi umuntu obuka imisebe eluhlaza lapho kushona ilanga uyisithandwa sangempela, noma uma umbhangqwana ubona lesi senzakalo ngasikhathi sinye, bayothandana impilo yabo yonke. Le nganekwane yokugcina yasakazwa eScotland maphakathi nekhulu le-XNUMX lapho ifinyelela kumbhali wamanoveli waseFrance uJules Verne, owaya kuleliya lizwe ngaphambi kokuba abe ngumbhali odume umhlaba wonke, wabamba futhi eminyakeni eminingi kamuva wabhala inoveli edumile.
Ukuqashelwa kwemisebe eluhlaza okotshani
Ubunzima bokubuka into ebonakalayo engabonakali ezweni laseScotland eligcwele inkungu kuqondisa umlingiswa ngokuzidela okuhlukile ukufeza inhloso enkulu. Bachelors ababili baseScotland banomshana wabo esitokisini. Intandane esencane egama layo lingu-Elena Campbell yaphakanyiswa ukuthi ishade nososayensi osemusha omuhle ogama lakhe lingu-Aristobulus Ucikras. Akazi ukuthi uyamthanda yini, ngakho-ke uvumela umalume wakhe amthathe ayonambitha imisebe eluhlaza, ngoba lapho Ukungabaza kwakho kuzosuswa futhi uzokwazi uma unothando lweqiniso ngaye. Kufanele ufunde kuze kube sekupheleni kwenoveli ukuthola impendulo.
Kusukela kushicilelwe incwadi ethi "The Green Ray", lesi simo somkhathi esiyingqayizivele somkhathi sivuse intshisekelo yabafundi abaningi, kufaka phakathi abanye ososayensi abaphethe ukwembula imfihlakalo yayo nokuthola izizathu ezingokomzimba ngayo. Ngokombono ochazayo, iqukethe ukukhanya okuluhlaza - yize kwesinye isikhathi kuthatha umbala ohlaza okwesibhakabhaka - umzuzwana owodwa noma emibili ubude, ivela emaphethelweni aphezulu elanga, idiski yenyanga noma iplanethi, njengoba nje isondela. Lapho nje leyo mizuzwana ihlala, iyanyamalala ngaphansi emkhathizwe.
Umoya kufanele ube nokuzola, kulokhu ungqimba lomoya oseduze nomkhathizwe lufana ne-prism, edala ukuhlukaniswa kwemibala eyakha ukukhanya okumhlophe kwezinkanyezi. Ekuphakameni okuthile ngenhla kwesibhakabhaka, isikhawu esiphakathi kwamadiski emibala ehlukene sincane kakhulu, futhi asikwazi ukusiqonda, kepha empeleni, idiski elibomvu lisondele emkhathizwe kune-disc ebomvu. Njengezinkanyezi sondela emkhathizwe bese ufiphele, ukuhlukaniswa kwalawa ma-disc monochromatic kuyanda. Maphakathi nediski yonke imibala iphakanyisiwe ukukhiqiza ukukhanya okumhlophe, kepha emaphethelweni aphezulu ama-violet nama-disc aluhlaza okwesibhakabhaka avela kancane.
Ngoba le mibala ifana nemibala yangemuva yesibhakabhaka, lapho izinkanyezi ziyehla kancane, umbala ofinyelela emehlweni ethu uluhlaza, okuwumbala olandelayo ku-spectrum ebonakalayo. Izinganekwane zabo eceleni, labo abanenhlanhla eyanele yokubona ukukhanya kwe-emerald bangaqiniseka ukuthi bazokhangwa okwesikhashana futhi baheheke.
Ugongolo oluhlaza luhlobo lokukhanya okuluhlaza okungabonakala ngomzuzwana noma emibili lapho ilanga lishona noma ilanga liqala ukuphuma, futhi libonakala lapho likhona khona ilanga. Lolu hlobo lwesimo sesimo sezulu kulula ukuluqaphela endaweni ecacile futhi ukukhanya kungafinyelela kumqapheli ngqo ngaphandle kokuhlakazeka.
Lokhu kukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka, okubonakala njengokukhanya noma ukukhanya okuluhlaza, kukhiqizwa ukukhishwa kokukhanya njengoba kudlula emkhathini. Kuvela ukuthi ukukhanya ezindaweni eziphansi kuhamba kancane ngoba umoya uvutha kakhulu kunomoya ezindaweni eziphakeme. Le misebe yelanga inokuhamba okugobile ukulandela ukugobeka komhlaba. Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka nohlaza okwesibhakabhaka okuphezulu kakhulu kunokusikeka okukhulu kunokukhanya okuvama kakhulu okukhombisa okubomvu nokusawolintshi. Ngakho-ke, imisebe yelanga eluhlaza neluhlaza okwesibhakabhaka itholakala engxenyeni engenhla yelanga, futhi iyabonakala emkhathizwe isikhathi eside, kanti ngakolunye uhlangothi, imisebe yelanga yemvamisa ephansi ibonakala ngokubomvu nangolintshi futhi imbozwe umkhathizwe.
Lapho ilanga lishona, akujwayelekile ukubona ukukhanya okuluhlaza okuncane okuluhlaza kwiLanga. Siyazi ukuthi lokhu kungenxa yesimo sezulu esibonakalayo esibizwa nge-green ray. Lesi simo senzeka eduze Izinto ezikhanyayo zezinkanyezi njengelanga, inyanga, iJupiter, iVenus, njll. Yize ungawubona lo mkhuba lapho ilanga lishona. Kunzima ukukubona lapho inyanga ikuqala.
Kodwa-ke, eChile, uGerhard Hüdepohl, unjiniyela wezithombe, ukwazile ukuthwebula izithombe ezivela kumasathelayithi asemhlabeni futhi, ezungeze i-European Southern Observatory (ESO) eMount Paranal, wathatha izithombe zokukhanya okuluhlaza emaphethelweni aphezulu eNyanga.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-ray eluhlaza kanye nezici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ukuduma Okuhlaza
Ikhiqizwa kanjani imvula eneasidi